RASMI: Laacibka ku guuleystay xiddiga bisha September ee Kooxda Arsenal oo la shaaciyey – Gool FM
(London) 13 Okt 2020. Waxaa shaaca laga qaaday laacibka ku guuleystay xiddiga bisha September ugu fiicnaa Kooxda Arsenal, iyadoo ay ku tartamayeen saddex ciyaaryahan.
Gabriel ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha September ugu fiicnaa kooxda Arsenal, kaddib markii uu helay 72% codadkii ay dhiibteen Jamaahiirta Gunners.
Daafacan dhexe ee reer Brazil ayaa sameeyay wacdaro weyn tan iyo markii uu yimid Waqooyiga Magaalada London, waxaana uu door weyn ka ciyaaray ciyaartii ay wajaheen Fulham, kaasoo ahaa kulankiisii ugu horreeyay, xitaa wuxuu furtay akoonkiisa kooxda.
Gabriel ayaa sidoo kale la yimid qaab ciyaareed kale oo adag markii ay Kooxda West Ham United ku garaaceen garoonka Emirates Stadium.
Gabriel oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha September ee Kooxda Arsenal ayaa helay 72% codadkii la dhiibtay, waxaana uu abaal-marintan ku garaacay Alex Lacazette oo kaalinta labaad galay iyo Hector Bellerin oo booska saddexaad ka soo muuqday.